Qabxiin seensa dhaabbilee barumsa Ol’aanaa Beekame
Date: August 24, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 24 Hagayya 2015) Qabxiin seensa dhaabbilee barumsa Ol’aanaa Itoophiyaa kan bara 2015 beekame.
Akka sabqunnamtiin biyya keessaa Daayireektarri muummee ejensii qorumsawwanii fi medaalli barumsa Biyyaalessaa, obbo Ar’aayaa Gabraigazaabeer, wabeeffatanii gabaasanitti qabxii seensa dhaabbilee barumsa ol’aanaaif godhamee jira.
Akkaatuma kanaan gara Yuuniivarstiiwwan mootummaatti guyyaafi galgalaan saayinsii uumamaatiin dhiiraaf qabxiin seensaa 343fi kanaa ol, dubartootaaf qabxiin seensaa 320fi kanaa ol akka ta’uuf murteeffameera.
Kanneen dhuunfaan qorumsa fudhataniif ammoo dhiiraaf 353fi kanaa ol dubartootaaf ammoo 331fi kanaa ol akka ta’uuf murteeffameera.
Naannoolee guddachaa jiraaniifi naannawa horsiisee bulaaf dhiiraaf qabxiin seensaa 332fi kanaa ol Dubartiif 317fi kanaa ol akka ta’uuf murtaa’eera.
Saayinsii uumamaatiin lammiiwwan dhaga’uu hin dandeenyeef qabxiin seensaa 297fi kanaa ol ta’eera.
Saayinsii hawaasummaatiin idileeniifi sagantaa galgalaatiin yuuniivarstiiwwan Mootummaa galuuf qabxiin seensaa dhiiraaf 322fi kanaa ol,akkaumas Dubartootaaf 302fi kanaa ol ta’uun himameera.
Lammiiwwan dhuunfaan qoramaniif ammoo dhiiraaf 330fi kanaa ol,Dubartootaaf 310fi kanaa ol ta’eera.
Naannoolee guddachaa jiraniifi horsiisee bulaatti dhiiraaf 310fi kanaa ol yammuu ta’u Dubartootaafa ammoo 295fi kanaa ol akka ta’uuf murteeffameera.
Saayinsii hawaasummaatiin namoota dhaga’uu hin dandeenyeef 275fi kanaa ol yammuu ta’u Namoota arguu hin dandeenyeef ammoo 230fi kanaa ol ta’eera.
Obbo Ar’aayaana akka mirkaneessanitti fagoon barachuufi dhaabbilee barumsa ol’aanaa dhuunfaa galuuf qabxiin seensaa 275fi kanaa ol ta’uu qaba.
Previous Previous post: Waldaan Hawaasa Oromoo Awuroppaa Irreeffattoota Waame.
Next Next post: የህወሀት የጦር አዛዦች ከ13 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተቀራመቱ::